အငမ်းမရ – Grab Love Story
ကျော်ညွန့်တွင် ယခုထက်ထိ ရည်းစားလည်း မရှိ၊ မိန်းမဆို ဝေလာဝေး။ ကားစီးသည့်အခါ ထိမိ ခိုက်မိတာလောက်ကလေးများသာ အတွေ့အကြုံ ရှိသည်။ ဘကြီးတော်သူ၏ ခြံတွင် လာရောက် နေထိုင်ပြီး သားသမီးကဲ့သို့ အတူ ၀ိုင်းဝန်း လုပ်ကိုင်နေသူ ဖြစ်သည်။ သူနေသော ရပ်ကွက်မှာ လူချမ်းသာများ၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ရန် သင့်လျော်သော မြေကွက်ကျယ်၊ ခြံကွက်ကျယ်ကြီးများဖြင့် တသီးတသန့် ဖြစ်နေလေသည်။ ဘကြီးလုပ်သူမှာ မြန်မာဖြစ်သော်လည်း တရုတ်လူမျိုးများ သုံးသည့် ပစ္စည်းထုတ်သော လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုကို လုပ်ကိုင်နေသူ ဖြစ်သည်။ ကိလေသာ ကာမပိုးများ ထကြွလာမှုကြောင့် ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် အချိုးကျသော မိန်းမများကို တွေ့လျှင် ရှေ့မှ၊ နောက်မှ၊ ဘေးမှ အစုံကြည့်ကာ စိတ်နှင့် ပြစ်မှားတတ်လာသည်။ ဗွီဒီယိုတွင် ကြည့်ရသည့် အမျိုးမျိုးသော လိုးနည်းများဖြင့် စိတ်ကူးလိုးနေမိသည်အထိ ဖြစ်လာသည်။ သို့သော်လည်း တက္ကသိုလ်ပညာ တစ်ပိုင်းတစ်စ သင်ဖူးထားသူမို့ အိနြေ္ဒပျက်အောင် အငမ်းမရ ဖြစ်တာမျိုးတော့ မဖြစ်။ ရုပ်မပျက်ဘဲ စိတ်ကူးဖြင့် မှန်းပြီး ဇာတ်လမ်းဆင်ကာ အရသာ ယူတတ်သူသာဖြစ်သည်။ ကျော်ညွန့်မှာ ကြည့်ပျော်ရှုပျော်သော ရုပ်ရည်ရှိပြီး ကိုယ်ခန္ဓာဖြင့် မြန်မာဆန်သူ လူငယ်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဘကြီးလုပ်သူ၏ စီးပွားရေး ပြေလည်မှုကြောင့် မချို့မတဲ့ စားသောက်နေထိုင်ရသူ ဖြစ်ရာ သူတောင်းစား ထမင်းဝလျှင် လီးတောင်သည် ဆိုသည့်အတိုင်း အစားကောင်း အသောက်ကောင်းများကို မတောင့်မတ မကြောင့်မကျဘဲ စိတ်ထင်သလို စားသောက်နေနိုင်သူ ကျော်ညွန့်တွင် အမြဲတမ်းလိုလို ကာမစိတ်များ ထကြွနေတတ်သည်။ ကြည့်ထားသော ဗွီဒီယိုကားများကြောင့်လည်းကောင်း၊ မြင်ရတွေ့ရသော ခပ်တောင့်တောင့် မိန်းမများကြောင့်လည်းကောင်း ခဏခဏ လီးတောင်တောင် နေလေ့ရှိရာ တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ်ခန့် ကိုယ့်ဘာသာ ဂွင်းတိုက်ပြီး အာသာဖြေနေရသည် အထိ ဖြစ်နေလေသည်။ လီးတောင်လွယ်တတ်မှုကြောင့် အိမ်မှ အပြင်ထွက်တိုင်း အတွင်းခံဘောင်းဘီ ဝတ်ပြီး စိတ်ကို ထိန်းထိန်းထားရလေရာ ၄င်းအတွက် ကျော်ညွန့်တွင် အမြဲ စိတ်သောက ဖြစ်နေရသည်။ လူပျိုလူလွတ်မို့ ဖာချပြီး အာသာဖြေရန်တော့ ကျော်ညွန့် စိတ်မကူး။ ဟိုလူလိုး၊ ဒီလူလိုးနှင့် ကြုံရာလူ အလိုးခံရသော မိန်းမကို သူ မသတီပေ။ ထို့ကြောင့် မိန်းမ လိုးချင်စိတ် ပေါ်ပြီး လီးတောင်လာတိုင်း ကိုယ့်လက်နှင့်ကိုယ် ဂွင်းတိုက်ပြီး အာသာဖြေလေ့ ရှိသည်။ ယခုလည်း နေ့လည်က ကြည့်ခဲ့သော အောကားထဲမှ စိတ်ထစရာ အကွက်များက ကျော်ညွန့်အား လီးမတောင် တောင်အောင် အားပေးသလို ဖြစ်နေလေသည်။ ဗွီဒီယိုကြည့်ပြီး ပြန်လာလာချင်း ဂွင်းတစ်ချီ တိုက်ခဲ့သော်လည်း အခု လီးထပ်တောင်နေပြန်ရာ ကျော်ညွန့်မှာ လီးတံကို လက်ဖြင့် အသာကိုင်ရင်း စိတ်ကူးနှင့် လိုးပွဲ ဖန်တီးနေမိသည်။ မြင်ရသူ ယောက်ျားများ ရမက်ထစရာ တောင့်တောင့်တင်းတင်း မိန်းမများကို ပြန်လှန် စိတ်ကူးဖြင့် မြင်ယောင်ရင်း သူ့တွင် မရှိသေးသော်လည်း ရအောင် ရှာကြံယူရန် စိတ်ကူး နေမိသည်။
ကျော်ညွန့် ကိုယ်တိုင်လည်း အနီးအနားရှိ အပျိုအအိုများထဲတွင် မခင်မေလို ယောက်ျားများ စွဲမက်စရာ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်မျိုး မရှိကြောင်း သိသည်။ စိတ်ကူးထဲတွင် လိုလားနေသော မိန်းမမှာ မခင်မေလို မိန်းမမျိုး ဖြစ်သည်။ “ကျော်ညွန့် ငါတော့ မင်းလိုသာ ခြံချင်း ကပ်နေရင် အဘိုးကြီးလာတိုင်း သွားသွား ချောင်းတယ်ကွာ …. မင်း မချောင်းဘူးလား“ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ စကားကြောင့် နဂိုက စိတ်ကူး မပေါ်မိသော ကျော်ညွန့်မှာ ချောင်းချင်စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာရသည်။ “အေးကွ …. မင်းဆို ဝင်ချင်သလိုဝင် ထွက်ချင်သလိုထွက်လို့ ရနေတာ၊ ဘယ်နေရာက ချောင်းရမယ်ဆိုတာ မသိဘူးလား ကျော်ညွန့်ရ“ ကျန်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က ထပ်ပြောသဖြင့် ဦးသာဒင်တို့ခြံနှင့် အိမ်အနေအထားကို သိနေသော ကျော်ညွန့်အတွက် အခွင့်အရေး တစ်ခုလို မြင်ယောင်လာမိသည်။ သူငယ်ချင်းများကို ဘာမှ ပြန်မပြောဖြစ်လိုက်သော်လည်း စိတ်ကူးထဲတွင် ချောင်းရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်မိသည်။ သည်နေ့ ဦးသာဒင် ရောက်နေကြောင်း ကျော်ညွန့် သိသည်။ စောစောကပင် ခြံထဲ၌ တွေ့ရသည်။ ယခုလောက်ဆိုလျှင်တော့ အိပ်ယာဝင်လောက်ပြီဟု အချိန်နှင့် အခြေအနေကို တွက်ဆရင်း တောင်နေသော လီးကို ခပ်ရွရွလေး ဆုပ်နေမိသည်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ ည ၁၀ နာရီရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သံချောင်းခေါက်သံ ပေါ်လာလေရာ ဦးသာဒင်တို့အား ချောင်းရန် စိတ်ကူးရှိနေသော ကျော်ညွန့်တစ်ယောက် ခါတိုင်းလို မိန်းမလိုးပွဲကို စိတ်ကူးနှင့် နွှဲကာ ဂွင်းတိုက်တတ်သည့် အကျင့်ကို အကောင်အထည် မဖော်သေးဘဲ ကုတင်ပေါ်မှ အသာ ထလိုက်သည်။ ခြံနှင့် အိမ်အနေအထား အားလုံး သိနေသူမို့ လက်တွေ့ချောင်းရန် အကောင်အထည် ဖော်နေသော ကျော်ညွန့်အတွက် ငါးမိနစ်ခန့် အကြာတွင် ဦးသာဒင်တို့ အိမ်ဘေးရှိ သူကြိုတင် ရှာဖွေထားသော အိမ်ထဲကြည့်၍ ရရန် အပေါက်ရှိသည့် နေရာကို ရောက်သွားလေပြီ ဖြစ်သည်။ တစ်ထပ်အိမ်မို့ ကျော်ညွန့် ကြည့်ရန် ပို၍ အဆင်ပြေ နေလေသည်။ “ဟင့်အင်း …. ဟင့်အင်း“ အသေအချာ မြင်နိုင်သော နေရာမို့ အိပ်ခန်းထဲရှိ ကုတင်ပေါ်တွင် ဦးသာဒင်တို့ လင်မယား၏ အနေအထားနှင့် အခြေအနေကို သဲကွဲစွာပင် ကျော်ညွန့် မြင်နေရပေပြီ။ ဗွီဒီယိုတွင် မြင်ဖူးထားသော်လည်း ယခုလို သူကိုယ်တိုင် အချစ်ပွဲနွှဲမည့် မြင်ကွင်းကို တစ်ခါမှ မကြုံဖူးသူမို့ ကျော်ညွန့် ရင်တွေ ခုန်နေလေသည်။ “ကွယ် …. သဲလေးကလည်းကွာ …. အစ်ကိုကြီး မဖြစ်လို့ လုပ်မပေးတာပါ၊ ကဲပါ …. ဒီဘက် လှည့်စမ်းပါအုံး“ “ဟင့်အင်း …. ဟင့်အင်း“ တစ်ခုခု ပူဆာသည်ကို မရ၍ သပိတ်မှောက်နေဟန်ဖြင့် ကုတင်စွန်းနားထ တိုးကာ ဦးသာဒင်အား ကျောပေးပြီး တဟင့်ဟင့် လုပ်နေသော မခင်မေ၏ နောက်မှ ကပ်ကာ ဖက်ထားသော ဦးသာဒင်၏ ချော့နေဟန်ကို ကျော်ညွန့် အတိုင်းသား မြင်နေ ကြားနေရပြီ ဖြစ်သည်။ “ကဲ …. ဒီလိုဆိုရင် …. သဲလေး သဘော …. သဲလေး သဘော“ “ဟင်း …. တကယ်နော် …. အစ်ကိုကြီး“ “အင်းပါ သဲလေးရယ် …. ကဲ ကျေနပ်ပြီ မဟုတ်လား“ “အဟီး ဒါကြောင့် အစ်ကိုကြီးကို ချစ်တာ သိလား“ လိုချင်တာ ရသည့်ဟန်ကြောင့် ကျောပေးပြီး ချွဲနေသော မခင်မေ၏ ကိုယ်လုံးကြီး ပြန်လှည့်လာပြီး ဦးသာဒင်ကို ပြန်ဖက်လိုက်ပုံနှင့် သူ့ဘက်ပြန်လှည့်လာသော မခင်မေ၏ ကိုယ်ကို အတင်း ဖက်ထားလိုက်ပြီး ပါးပြင်နှစ်ဖက်အား တရှူးရှူးနှင့် အငမ်းမရ နမ်းနေသည့် ဦးသာဒင်ကြောင့် လာချောင်းရကျိုး နပ်ပြီဟု ကျော်ညွန့် သိလိုက်သည်။ “အို …. အစ်ကိုကြီးကလဲ … ကဲပြီကွာ … သဲ အသက်ရှူ ကြပ်တယ် … အိအိ“ ဦးသာဒင်က အတင်းဖက်ပြီး နမ်းနေသည်။
တကယ်တော့ ဟန်နီမှာ ဦးသာဒင်၏ တူမဖြစ်သည်။ မခင်မေတွင် ကိုယ်ဝန်ရှိလာချိန်နှင့် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် နယ်မှ ကျောင်းလာတက်နေသော ဟန်နီအား အဆောင်တွင် မနေစေတော့ဘဲ သူ့အိမ်တွင် ဦးသာဒင်က ခေါ်ထားပြီး မခင်မေအား ဝိုင်းကူလုပ်စေသည်။ မခင်မေ၏ ကိုယ်ဝန်မှာ ဦးသာဒင်နှင့် ရသလား ကျော်ညွန့်နှင့် ရသလားတော့ မည်သူမျှမသိ။ ဦးသာဒင်မှာ မယားကြီးနှင့် ကလေး မရထားသူဖြစ်သည်။ ယခု မခင်မေတွင် ကလေးရသည်ဟု သိသောအခါ အတော်ဝမ်းသာနေလေသည်။ ရကာစလောက်က တားဆေးများ စားနေသော မခင်မေတစ်ယောက် ဦးသာဒင်အပေါ် ပိုမိုမြဲအောင် ဆွဲနေနိုင်ဖို့ ကလေးရထားမှ ဖြစ်မည်ဟု အတွေးပေါ်လာသဖြင့် ဆေးဖြတ်လိုက်သည်တွင် ကိုယ်ဝန် ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။ မခင်မေလည်း အဖော်ရ၊ ဟန်နီလည်း အဆင်ပြေစေရန် ဦးသာဒင် စီစဉ်ပေးခြင်းမှာ ကျော်ညွန့်ကိုပါ ဆက်နွယ်သွားရလေသည်။ နယ်မှ ဟန်နီရောက်လာကထဲက ကျော်ညွန့် စိတ်ဝင်စားသွားမိသည်။ မျက်နှာမှာ ကြည့်ပျော်ရှုပျော်ရုံသာ ရှိသော်လည်း ကိုယ်လုံးက သူကြိုက်သည့် အနေအထားမို့ ကျော်ညွန့် သဘောကျမိသည်။ သည်အထဲက ဟန်နီမှာ သူ့ကိုယ်သူ လှအောင် ပြုပြင်တတ်သူ ဖြစ်ရာ နေ့တိုင်း ကက်ဆက်ခွေဖွင့်ပြီး အေရိုးဗစ် ကစားနေခြင်းက ဟန်နီကို ဂရုတစိုက်ကြည့်နေသော ကျော်ညွန့်အတွက် စိတ်ဝင်စားဖို့ ဖန်တီးသကဲ့သို့ ရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် ဟန်နီ အေရိုးဗစ်ကစားချိန် ရေချိုးချိန်ကို လစ်ရင်လစ်သလို အချိန်ရလျှင် ရသလို ချောင်းကြည့်မိသည်။ အပြင်တွင်လည်း ရင်းနှီးအောင်နေရင်း မကြာခင်ကပင် သူ့ကို ချစ်နေပြီဟု အရဲစွန့် ဖွင့်ပြောခဲ့သည်။ သူ့အိမ်ထောင်ဘက်အဖြစ်လည်း စိတ်တွင် သတ်မှတ်လိုက်သည်။ ဟန်နီထံမှတော့ အဖြေမရသေး။ ဟန်နီကို အိမ်ထောင်ဘက်အဖြစ် ကျော်ညွန့် ရွေးလိုက်ခြင်းမှာ တခြားနေရာများ၌ ချစ်သူမရှိခြင်း၊ အခုအချိန်အထိ ဘယ်မိန်းမကိုမှ အိမ်ထောင်ဘက်အဖြစ် မရွေးရသေးခြင်း၊ ဟန်နီ၏ ကိုယ်ခန္ဓာ အချိုးအစားက သူ့စိတ်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်း၊ နုပျိုသန်စွမ်း ကျန်းမာကျော့ရှင်းခြင်းများကြောင့် ဖြစ်သည်။ အလစ် ခိုးခိုးလိုးနေရသော မခင်မေမှာလည်း သူ့မိန်းမ မဟုတ်။ အချိန်မရွေး ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် လိုးခွင့်ရမည့် မိန်းမတစ်ဦးကိုလည်း အမြန်လိုချင်စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွင် ဟန်နီ ရောက်လာခြင်းက ကျော်ညွန့်အတွက် အခွင့်ထူးတစ်ရပ် ရရှိသွားသလို ဖြစ်သွားသည်။ သူ့စိတ်တွင် ပေါ်နေသော ကာမစိတ်များကို ဟန်နီ အေရိုးဗစ် ကစားခြင်းနှင့် ရေချိုးခြင်းတို့ကို ချောင်းကြည့်ကာ လိုးချင်စိတ်များအား ဂွင်းတိုက်ပြီး ဖြေရှင်းနေရသည်။ မခင်မေတွင်လည်း ကိုယ်ဝန်ရင့်လာပြီမို့ သူ မလိုးဖြစ်တော့။ အေရိုးဗစ် ကစားပြီးသွား၍ အနားယူနေသော ဟန်နီ၏ လိုးချင်စရာ ကိုယ်လုံးလေးကို အငမ်းမရနှင့် မချင့်မရဲ ကြည့်ရင်း ပြန်ချိန်တန်ပြီမို့ ကျော်ညွန့် ထွက်လာခဲ့လေတော့သည် …… ပြီးပါပြီ။